Tagloo, iyo nzira iri nyore yekumaka uye kugovana mafoto | IPhone nhau
Tagloo, iri nyore nzira yekumaka, kugovana uye kutsvaga mifananidzo
Unoshuva kuti paive nenzira yakapusa yekuchengeta, kugovana uye kuronga mifananidzo yako? Ko kana ivo vaigona zvakare kuchengetwa mugore? Zvakanaka izvi zvinogoneka nekuda Tagloo, chishandiso che iPhone (munguva pfupi zvakare yeiyo Android) iyo yatinozove ne smart reel mugore iro rinotibvumidza isu tag, share, uye tsvaga mifananidzo nenzira inokurumidza, yakapusa, yakasununguka uye, kusiyana nemamwe masevhisi, zvakavanzika zvachose.
Mukuedza kwake kuita kuti kugovana zvifananidzo zvive zvakatinakira, Tagloo aifanira kunge achifungidzira. Isu tichagadzirisa yedu yega reel uye kana tichida tumira pikicha kune waunobata, isu tinongofanira kudaro tag mufananidzo wacho nezita rako. Yedu yekutaurirana ichagamuchira iyo pikicha uye ichagara ichiita kuti iwanikwe uye kumakwa kuti tikwanise kuitsvaga mune ramangwana. Izvo zvinouya pakutaurirana kwedu pakutanga chifananidzo chehuremu hushoma, asi iwe unogona kukopa iyo yekutanga mufananidzo pese paunoda.
Tagloo anoshandisa system ye otomatiki kunyora, zvese zvakagadzirirwa kuita kuti zvinhu zvive zvakanaka uye zvive nyore. Iyo application inoshandisa imwe metadata yemufananidzo kuwedzera zuva nenzvimbo, kune iro boka rekumisikidza rinogona kuwedzerwa. Kutenda kumategi aya tinogona kukurumidza kuwana vashandi kana mapoka (ayo atinogona zvakare kureva semaarubhamu). Siri anotibvumidza kuti tiwane mafoto nekutsvaga nezwi redu, asi mubatsiri wedu chaiye haakwanise kutitsvagira mafoto ayo isu neimwe shamwari tinoonekwa. Tagloo inotibvumidza kutsvaga nekuwana, semuenzaniso, «mafoto uko ini naRaúl tinoenda kumba kwake muna 2013 na2014 ″. Izvo zvakanaka, handiti?
Sezvazviri mune chero meseji yekushandisa, senge Teregiramu kana Whatsapp, tinogona kugadzira mapoka uye wedzera mukati mayo kune avo vatinoda kutumira kwavari mapikicha atinoda. Kana isu tikasarudza kugadzirisa mamaki emifananidzo yemapoka iwayo, shanduko dzinozoonekwa kune dzimwe nhengo dzeboka. Kana mushandisi akamaka pikicha neshoko rekuti "ini", nhengo dzese dzeboka dzichaona kuti kuonana kwedu kunoonekwa mumufananidzo iwoyo, asi isu tichaona zita ravo.
Sechishandiso chinochengeta mafaera mugore, isu tichava nenzvimbo yekuganhurirwa. Iyo muganho uri 3GB pamushandisi, asi chinhu chakanaka ndechekuti iwo chete mapikicha atinoisa ndiwo anotora nzvimbo. Kana vashanu vanogovana vachigovana mapikicha edu paTagloo, isu tinogona kuti mumwe nemumwe ane 5GB reel. Zvine musoro, patinowedzera kugovana edu mafoto, inowedzerawo nzvimbo pane yedu yakagovaniswa reel.
Vashandisi vasina kunyoreswa vanozove neayo maakaundi avo patinovaisa mumufananidzo. Izvo hazvina kunyatsoita seizvozvo, asi inzira yekureva kuti, kana edu ekubatana akanyoresa, iwo mapikicha maakange akamakwa anozozvimirira iwo. Asi chakanyanya kunaka mutengo wayo, sezvo Tagloo iri application yemahara, saka hauna chikonzero chekuzviedza. Parizvino inongowanikwa chete kune iPhone (iOS 8 kana kuti gare gare) asi munguva pfupi ichave zvakare yeApple uye mune yewebhu vhezheni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Tagloo, iri nyore nzira yekumaka, kugovana uye kutsvaga mifananidzo
Ongororo yeiyo Dock yepamutemo yeApple Watch